Masuuliyiin Soomaaliya iyo dunidaba caan ka ah oo isku khilaafay waxa laga yeelayo dadka Soomaaliyeed ee baaba . war bixin la xariirta hab dhaqanka Dowladda Liibiya (Faallo)(Riix halkaan) Kuwa Soomaalinimadii Hawiyinimo ka doortey?!!!.(Riix halkaan)
Shiikh Shariif Shiikh Axmed, hala sugo(Riix halkaan)
58 qof oo Ciidamada Ethiopia ay shalay xasuuqeen(Riix halkaan)
Ma`ooyey Markaan Xorownay? (Faallo)(Riix halkaan)
Kuwa Soomaalinimadii Ka Doortay Isaaqnimo(Riix halkaan)
Kooxda Mbagathi & Kadeedka Ummadda(Riix halkaan)
Caruurta laga xado Soomaaliya oo la geeyo Adis(Riix halkaan)
Somaliya Maanta Heerka Ay Taaganthay!!!(Aragti)(Riix halkaan)
kuwee Dooranayaa M Dheere,C/taax (Faallo)(Riix halkaan)
Guud Mar Dagaaladi Sokeeye ee Somaliya.(Aragti)(Riix halkaan)
Mareykanka oo dano gaara ah ka leh Soomaaliya(Riix halkaan)
Goormuu Oday noqday C/llahi bal calaamada Illaahay?(Riix)
Shariifow ama Mudulood ahoow ama Muslim ahoow (Riix)
Findoobka Soomaalida faraha ka daaya!!!
Anigoo ka ambaqaadaya xaalka Soomalida iyo heerka halista ah ee uu maanta marayo, ayaan jeclaystay inaan qoraalkaan usoo gudbiyo Soomaaliweyn meel kastay joogaan. Maqaalku wuxuu si toos ah oo aan gabbasho lahayn ula hadlayaa intooda ku dhex jirta weegaarka siyaasadda (Dkmg) iyo weliba waxgaradka ay taladu ka go’do.
Laba arrimood oo kala duwan oo kala daran, baa igu dhaliyay soo gudbinta maqaalkaan: Waa mide, arrin shiddo badan oo aan ummadda u fasirayo, una jilcinayo, si dul iyo adkaysi loogu yeesho, maadaama miraha ka dhalandoona, hadday bislaadaan, si wanaagsan lagu gurandoono; iyo midda labaad oo ah, arrin qalafsan oo shar wadata, oo aan ummadda uga digayo, si looga feejignaado. Saddexdaan eray ee hoos ku qoran, macnaha ku hor qoran baan ula jeedaa:
Daababka: Madaxda dowladda qaarkood
3da Faas ee beesha caalamka: Itoobiya, Keenya & Itaaliya
Sama isu falayaal; ururrada samafalka
Ugu dambaystii, wixii maqaalkaan ka yimaada (shar iyo khayrba) aniga keliyaa ka mas’uul ahe, dadow taa hala ogaado.
Soomaalida in ka yar 2 sano ayaa uga dhimman 50 jirsadkii, haddana, waxaad ku arkaysaa astaamo iyo dhaqammo ka duwan ama aad uga fog kuwii lugu yiqiin 50 jirka. Taasina, waxay ummaddii dhaxalsiisay Quus, luggooyo iyo jahwareer uga yimid 3da faas ee beesha caalamka oo ay waldaaminayaan ( isla sidaan) daababka kala ah talaxume, hoggaanxume, farsamaxume iyo garaadxume Soomaaliyeed!!! Goor iyo ayaanba, arrimo, warar iyo ujeeddooyin kaa yaabiya ama kaa nixiya baa ku soo gaaraya.
Laba sano oo kaamil ah ayaa Soomaalidu Keenya u fadhiday, siday usoo dhisi lahaayeen qaabkii ay dowlad soomaaliyeed yeelan lahayd. Waana lugu guulaystay in dowlad soomaaliyeed oo la aqoonsan yahay ay dhalato. Xubnihii wax ka dhisay iyo qaabkii lugu dhisayba, midkoodna iin iyo dhaliil la’aan ma ahayn. Qolooyinkii muddada dheer hor taagnaa dowladnimada, baa laftigoodii lugu dhisay! Xal kaloo jeerkaas muuqday oo heshiis lugu wada noqon karay ma jirin. Waxaa laga fursan waaayay in la adeegsado googaalihii ahaa, “Col ku dilay ciidan mood”, ee jawaabtiisu ahayd ‘Qodaxda’. Reer miyigu, markay qodaxi muddo, qodax kale bay isaga bixiyaan.
Keddib, soomaali fara badan baa bilawgiiba ka niyad jabtay dowladdii, markay arkeen xubnihii dowladda oo feer, haraati iyo jeega dharbaax is kala daalay, oo kuraas iyo bakoorado isla dhacaya!!!!
Marna lama filayn in rag odayaal u badani, ay lasoo baxaan dabeecadihii, shucuurtii, qiiradii iyo fudaydkii lugu yiqiin dhallinyarada!!
Marxaladaha kala duwan ee koritaanka naflayda oo idil, waa nidaam Allihii abuurtay uu ugu tala galay. Waxaase jira arrimo ka dhasha bani aadamka laftigiisa, bey’adda iyo ama cudurro, oo sababa in nidamkaas habkii uu ku socon lahaa uu curyaamo, gaabiyo, hadba hakado, qaloocdo, dheereyo ama uu xiimo. Siyaasadduna waa la mid ,oo haddaan ruuxu u bislaan, oo uusan khatarteeda fahmin, oo uusan soo marin marxalado ad adag, sida qaangaarida lugu yaqaan, wuxuu halis u yahay inuu iska laalaadiyo, si xun u fahmo,faraha kaga gubto ama uu dad ku halaago!
Waxaa la yiri, oday roob ku soo da’ay oo aad u dhaxamaysan, baa markii dambe yimid meel dab ka shidan yahay. Intuu ag kadaloobsaday buu gacmihii oo dareen beelay, qabow dartiis dabkii saaray. Intuu si fiican gacmihii dabka u dhex geliyay buu yiri: “Bal waxakan bay Naar ku sheegeen, Ilaahow aniga iyo waaridkayba ugu roonoow!!!”
Takhaatiirta cilmul nafsigu, markay baarayaan xaalka qof dhibban ama si kale wax si uga yihiin , waxay marmarka qaarkood, dib u baaraan noloshiisii hore (alyacni yaraantiisii): Halkuu kusoo koray, siduu u soo koray, cidda soo korisay iyo cidda uu la soo koray iwm.
Iyadoo Sagaal jirro la yahay (1969kii), baa agoon la noqday. Keddibna dowladdii kacaanka baa nala wareegtay oo xil weyn iska kaaya saartay. Dowladdaasi waxay hadaf iyo baaq ka dhigatay sidii agoonta 9 jirrada ahi u heli lahaayeen nolol iyo korriimo wacan, degaan wanaagsan, waxbarasho iyo caafimaad lacag la’aan ah.
Dhaliisha keliya ee ay dowladdu lahayd, waxay ahayd,”inay carruurtii ka mamnuucday cayaarihii (tus. kuukuun, kadhimay kadhim, yoolyool iwm), kaftankii, legdintii, caydii, edeb-darradii, gunuunucii, qayladii iyo hadal oo idilba!!”
Haddaba, waxyaalo fara badan oo ay ka mid yihiin astaamihii iyo dabeecadihii lugu yiqiin koritaanka carruurta ayaa caburmay. Xataa finkii iyo dareenkii doobnimada baa soo bixi kari waayay, cabsi awgeed, keddibna isu beddelay xajiin loo jeelayo oo oogada (gaar ahaan kala goysyada iyo agagaarrada xubno xasaasi ah) ka soo yaacday. Haddaba, xajiintaas loo bixiyay “Isnidaamiska” ayaa halkii findoobka noo gashay oo giddigeen na wada haleeshay 1974kii. Wax Alla wixii lugu yiqiin qaangaridda ayaa hakad galay, iyadoo dhanka kale, korriimadii jirku ay caadi u socoto!!! Jirkii iyo garaadkii baa kala tegay!!!
Qaangaariddu waa marxaladda u dhexeysa carruurnimada iyo waayeelnimada. Waa jeerka ay bilawdaan isbaddalada ku dhaca jirka iyo maskaxda carruurta, si ay muddo go’an (cayiman) keddib waayeelnimo(adulthood) ugu bislaadaan. Ereygu wuxuu ka kooban yahay laba erey oo laysku daray: ‘Qaan’ iyo ‘gaarid’. Qaantu waa dhaawac ama waxyeello kale oo cid la gaarsiiyay, qiimaha laga simo, oo qofka wax la yeelay ama wax ka maqan yihiin la siiyo. Qaangaariddu waa heerka ama goorta (15 jir) qofka falalkiisa (af iyo addinba) iyo wixii ka dhashaba loo qoro, oo adduun iyo aakhiraba lagula xisaabtamo.
Faa’ido weyn baa kasoo baxday labadii sano ee Keenya la fadhiyay. Hurdadii iyo fadhigii badnaa, buuq- dagaal- iyo cabsi la’aantii meeshaas oo ay weheliyaan wadajirka cimilo qabow, cunno macaan iyo qayilaad, ayaa suurageliyay in astaamihii qaangaaridda ee beri hore xayirmay, ay fursad labaad helaan. Findoob ayaa markii ugu horreysay (44 sano kedib) helay fursad uu wejiyada uga soo baxo! Waxaana loo qabtay inuu ku dhammaado muddo shan sano ah oo ku meelgaar ah. Si keddibna loo galo marxalad bisayl siyaasadeed ah, oo dalka gudihiisa lugu tartamo, oo looga xoroobo talooyinka iyo shirqoolada 3da faas ee beesha caalamka!!!
Iyadoo muddadii shanta sano ay wax yar nooga dhiman yihiin, baa waxaa hal mar soo wada baraarugay 3dii faas ee beesha caalamka. Waxay goosteen inay qaadaan tallaabo degdeg ah oo adag, intaan muddadu dhammaan. Waxaa u muuqday in haddii muddadu dhammaato ay talo farahooda ka baxayso. Haddii waqtiga findoobku dhammaado oo siyaasiyan loo qaangaaro – waayeelna la noqdo, waxaa meesha ka baxaya sama isu falayaasha iyo 3da faas ee beesha caalamka!!
Iyagoo adeegsanaya daababkooda, ayay madaxii dowladda surgooyo iyo turaanturo isugu dareen. Markaas buu meesha isaga baxay.(waayeel tag lama yiraahdee,wuxuu ku tagaa la tusaa!). Keddibna, Itoobiya waxay tiri,’dalka waan ka baxaynaa!’ oo durbadiiba Xamar ka baxeen. Iyagoo farxad iyo raynrayni ka muuqato bay baxeen. Sababtoo ah, waxay shaxda ay degeen soo gaarsiiyeen, meel ay wax magaratadu kasii wadi karaan!!!
Maanta hal amxaar ahi xamar majoogo. Cidna umasoo jeeddo inay wax ka qabato, ama wax ku qabsato(ku shiraan kuna wax qaybsadaan!). Waxaa dowlad-diidkii u tafaxaytay in xamar lugu soo cesho sidii amxaarada ka hor loo kala deggenaa!!! Waana arrin aan hadda socon karin, sababtoo ah, maanta waxaa xamara madaxa kaga jirta Falaar dowladnimo, oo haddii laga soo bixiyo iyo haddii loo daayaba, midna dowlad-diidku ku noolaan karin. Dadka qaar bay weli la tahay in haddii fallaarta madaxa kaga jirta Xamar laga soo bixiyo, ay noolaan karayaan.
Waxaa jirtay sheeko aan beri hore maqlay oo ku saabsanayd nin muddo badan laga celcelin jiray inuu dagaalada ka qayb galo oo fulaynimo lugu xaman jiray. Siduu ula soo taagnaa ‘Ragga ka harimayo’, ayaa markii dambe loo oggoladay.
Raggii buu raacay oo weerar ka qayb galay. Nasiib darro, fallaar ayaa madaxa kaga dhacday (gashay). Ninkii inta lala soo cararay baa takhtar loo keenay, si fallaarta madaxa looga soo bixiyo. Takhtarkii baa inta dhaawaca eegay yiri ”Fallaarta lama soo bixin karo, sababtoo ah, waxay gaartay oo ku dhex jirtaa maskaxda. Haddii fallaarta lasoo bixiyo, qayb maskaxda ah ayaa soo raacaysa, ninkuna waa dhiman karaa”. Ninkii markuu intaas maqlay ayuu yiri, ”War fallaarta iga soo bixi, meesha maskax kuma jirtee!! Maanaa dagaal aadi lahaa, haddaan maskax leeyahay!!!”.
Baarlamaankii Baydhaba ee loo adeegsaday surgooyada dowladdana, maanta ayuu dareemay inuusan cago ku taagnayn, oo uu arkay mindida u taal Jabuuti!!! Halkaan waxaa xusid mudan arrintaan: Ma waxaa Soomaaliweyn la qumman ama la gudboon inay barlamaanka gafay ay “Mac sonkor” ku yiraahdaa, oo ay gowraciisa daawadaan? Mise inay la saftaan oo ay mindida ka badbaadiyaan, iyagoo og gafkiisa? Haddii barlamaanka baydhabo la gowraco, waaxaa dhimanaya qaangaariddii afarta sano soo socotay. Waxay noqonaysaa in sheekada, haddana kow laga soo bilaabo, iyadoo ay na hor boodayaan 3da faas ee beesha caalamka. Haddiise la badbaadiyo, waxaa dhici karta in muddadii harsanayd la dhammaysto, keddibna dalka gudihiisa innagoo keligeen ah aynu ku qaangaarno!!!
Qaylada hadda kasoo yeereysa baarlamaanka Baydhaba, ee uu leeyahay ‘halkaan ayaa doorashada madaxweynaha lugu qabanayaa!’, waxay soomaalidu ku fasirtay saddex arrimood midkood: inuu harjad iyo naf la caari yahay; ama in, isagana, sida shirka Jabuuti oo kale ay 3da faasi ka dambeeyaan; ama inuu gafkiisii gartay oo uu hadda Dkmg ah badbaadi is leeyahay.
Ugu dambaystii,Qaar kalaa u tafaxaytay inay dibedda mar labaad dowlad sal baruur ah ku soo dhisaan!!! Gole la yiri,waa midnimo muqaawamo, koox keliyase ah! Meeye kooxihii kale sida: Garabka Asmara, Garabka Raaskambooni, Alshabaab, Albanaat (Yurub & Ameerika u badan!), Al takfiir, Ahlu sunnah wal jamaaca, Jabiso, Ahlu faral wal marjaciya!!!!!!!!
Jabuuti ayaa shir loogu magac daray dibu heshiisiin, waxaa laysku af gartay in la soo dhiso dowlad 2aad oo tan hadda tiro le’eg (275 xubnood) oo loogu talagay inay tan hadda joogta gowracdo – si aysan waqtigeeda u dhammaysan, findoobkuna nugu dil dilaaco inta faraha lala galo!!!
Marakanna, haddii findoobku nugu dil dilaaco, arrintu ma sahlanaanayso. Nugu noqonmayo ‘Isnidaamis’ sidii berigii hore oo kale. Wuxuu nugu noqon doonaa Furuq daawadiisa joogtada ahi ay tahay 3da faas ee beesha caalamka.
Xaashi Yaasiin Cismaan
© Arrow Online.com 2008 ®